Hambalyo Lionel Messi, Waad Mahadsan Tahay Virgil Van Dijk In Aad Messi Jeebkaaga Ka Soo Saartay-Jamaahiirta Liverpool Oo Baraha Bulshada Qabsaday. - Gool24.Net
Hambalyo Lionel Messi, Waad Mahadsan Tahay Virgil Van Dijk In Aad Messi Jeebkaaga Ka Soo Saartay-Jamaahiirta Liverpool Oo Baraha Bulshada Qabsaday.
December 3, 2019 Mahamoud Batalaale
Kadib markii uu Lionel Messi markii lixaad oo rekoodh aduun ah uu ku guulaysatay abaal marinta Ballon d’Or ee xidiga aduunka ugu fiican, waxaa baraha bulshada qabsaday hadalo ay taageerayaasha Liverpool kaga falceliyeen.
Jamaahiirta kooxda Liverpool ayaan cadho badan ka muujin in Lionel Messi uu abaal marinta ballon d’Or ka hor qaaday Virgil Van Dijk oo kaalinta labaad ku dhamaystay balse waxay arintan ka sameeyeen kaftan warbaahinta soo jiitay.
Lionel Messi waxa uu Liverpool kaga hor yimid kulamadii Camp Nou iyo Anfield ee afar dhamaadkii UEFA Champions League isaga oo kulankii lugtii hore wacdaro ku dhigay Liverpool balse waxa uu waji gabixii ugu waynaa kala laabtay Anfield.
Jamaajiirta kooxda Liverpool ayaa marka hore u hambalyeeyay Lionel Messi laakiin waxay Virgil Van Dijk uga mahad celiyeen in ee uu jeebkiisa ka soo saaray Lionel Messi si uu abaal marintan ugu guulaysato iyaga oo Messi ugu duur xulaya ceebtii Anfield.
Inkasta oo sanadihii la soo dhaafay uu abaal marinta Ballon d’Or ku soo guulaysanayay xidiga koobka Champions league soo qaada isla markaana uu Luka Modric sanadkii hore uu abaal markintan ka hor qaaday Messi oo xog ahaan ka fiicnaa, haddana jamaahiirta Liverpool ayay qaar ka mid ahi la yabeen sababta aanu Van Dijk markiisa abaal marintan ugu guulaysan.
Haddaba iyada oo ay adag tahay in la soo wada qaadan karo falcelintii taageerayaasha Liverpool ee guusha Lionel Messi iyo in Van Dijk uu ka qaaday Ballon d’Or, waxaanu halkan ku soo qaadaynaa qaar ka mid ah falcelintan.
Taageere Liverpool ah ayaa soo qoray: “Dhamaanteen waynu ognahay in la dhacay Virgil Van Dijk”.
Laakiin taageere kale oo Liverpool ah ayaa soo qoray: “Ma jiro hal qof oo ka muransan in Lionel Messi uu yahay ka aduunka ugu fiican, laakiin miyuu xaqiiqdii soo qaatay 2019 ka fiican Van Dijk? Maya”.
Taageere Man United ah ayaa arinta soo dhex galay wuxuuna soo qoray: “Ka taageere Manchester United ahaan ayaan xataa caawin karin, laakiin waxaan dareen sanahay in Virgil Van Dijk la boobay maadaama oo uu sanad wayn soo qaatay, laakiin Messi waa xidiga abid ugu fiican hambalyo”.
Taageere kale ayaa soo qoray: “Si ay u muujiyaan sababta uu Messi ugu qalmay waxay soo bandhigeen xogta waayihiisa ciyaareed iyo guulihiisa waayihiisa ciyaareed. Sidii uu Klopp sheegay: “Xidiga aduunka ugu fiicani waa Messi, xidiga sanadkan ugu fiicanina waa Van Dijk”.
Taageere kale ayaa isna soo qoray: “Si kastaba yaa danaynaya, dhamaanteen waxaynu ognahay in Virgil Van Dijk uu yahay xidiga aduunka ugu fiican, isagu uma baahna in uu ku guulaysato tartan caanimo ah”
“Ixtiraam wayn ayaan u hayaa Messi kaas oo laga yaabo in uu yahay xidiga adid ugu fiican, laakiin Van Dijk waa la boobay” ayuu taageere kale soo qoray.
“Markale ayuu dhicii yimid, Van Dijk hal mayl ayuu yahay xidiga aduunka ugu fiican” ayuu taageere kale soo qoray.
Laakiin fariimo badan oo kale ayaa loogu hambalyeeyay Lionel Messi balse waxaa maad ahaa kuwo Van Dijk loogu mahad celiyay in uu Messi jeebkiisa ka soo saaray si uu abaal marinta Ballon d’Or u gudoomo.